Örebro: Labo kamid ah iskuulada Al-Azhar oo la xiray Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaÖrebro: Labo kamid ah iskuulada Al-Azhar oo la xiray
Kormeerka Iskuulada Iswiidhan wuxuu xiray labo iskuul oo ku yaal Örebro oo ay maamusho mu’asasada Al-Azhar ee magaalada, kadib markii laamaha amaanka (Säbo) ay u arkeen caruurta labada iskuul inay qatar ugu jiraan xagjirnimada iyo qorista arimaha rabshadaha la xiriira. Sida ay tabisay TT.
Go’aanka kormeeruhu wuxuu ku salaysnaa fikrado badan oo yimid, oo ay qeyb ka yihiin “Säbo,” ka dib markii la ogaaday xubin ka ahaa guddiga sare ee Mu’asasada uu u safray Suuriya si uu ugu biiro ISIS.
Kormeeraha iskuulka ayaa ku qoray go’aankiisa, “Sida laga soo xigtay hay’adda amniga, (A.A) (xubin hore uga mid ahaa guddiga) wali wuxuu taageersan yahay dhaqdhaqaaqyada islaamka rabshadaha wata, wuxuuna leeyahay xiriir balaaran oo xiriir ah gudaha deegaanka islaamiyiinta rabshadaha ka wada ee Örebro.”
Go’aanka kormeeraha ayaa lagu sheegay in “carruurta ay u badan tahay in maskaxda laga xado oo ay ku biiraan kooxaha islaamiyiinta.
Waxa uu tilmaamay in dhowr shaqaale oo ka tirsan labada iskuul ay dabagal ku hayaan maxaa yeelay waxaa looga shakiyay inay yihiin taageerayaasha kooxaha islaamiyiinta.